Positano ari cliffside musha pamusoro wokumaodzanyemba Italy Amalfi Coast. Maererano nengano akasikwa Neptune, Mwari wegungwa uyo aive kunze rudo zveshuwa. Its hurungudo kumahombekombe Nokutonga, yakamanikana migwagwa mudungwe pamwe zvitoro uye cafes iri inozivikanwa. Iwe nomumwe wako unofanira kushanyira Chiesa door Santa Maria Assunta uine munhu 13th remakore Byzantine Icon wemhandara Mariya.
Unodii kure vamwe kuti keke and head to The Sentiero degli Dei Hiking muhwezva, iro rinoratidza Positano kune dzimwe mashiripiti kumahombekombe maguta. Kupedzisa zuva dzako pamwe remba mumigwagwa yekare, Muchifukura zvechokwadi Restaurants, uye dzimba zvenhau rakagumbatirwa mugomo uye zvakabudiswa pakati zvechokwadi chikafu. Unganetseka kuti zvauchasarudza kusiya kwako hanimunu!
Iri guta diki rakakomberedzwa nemasvingo rakazadzwa neyakavakirwa neGothic ndiyo yakakodzera zvakakwana Vakaroorana vari kutsvaga kusununguka ine nhoroondo diki uye kuona masikati. Nepo chikepe ndeimwe yenzira kuona Croatia zvavo-uye regai pachena, also a great way to arrive on a hanimunu-as romwedzi uyu, Ber ave pamutemo yacho munharaunda, asi zvirokwazvo kwete nenzira ungafunga.
#hanimunu #rudo europetravel zvideo